» “चोलेन्द्र शमशेर, प्रकरणले, लियो नयाँ रुप ,राणा र देउवा दुवैको पद,धरापमा”! “चोलेन्द्र शमशेर, प्रकरणले, लियो नयाँ रुप ,राणा र देउवा दुवैको पद,धरापमा”! – हाम्रो खबर
“चोलेन्द्र शमशेर, प्रकरणले, लियो नयाँ रुप ,राणा र देउवा दुवैको पद,धरापमा”!
“नेपालका लागी नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले मन्त्रीपरिषदमा प्रधान्यायाधिशले भाग खोजेको कुरा सुनिनु निकै गम्भिर भएको बताएका छन् ।”
“ओटीभी नेपाल डट कम सँगको विशेष कुराकानीमा डा भण्डारीले न्यायपालिकाका प्रमुखले कार्यपालीकामा भाग खोज्ने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा भन्दै यो कुरा यतिकै ढिममिस हुन नदिने बताए ।”
“आफुलाई अहिले सम्म पनि यो कुरा विश्वासनै नलागेको भन्दै डा भण्डारीले यहि यो कुरा साँच्चै हो भने चिज धेरै गम्भिर भएको बताए । साँच्चैनै प्रधानन्यायाधिशले मन्त्रीपरिषदमा भाग मागेको हो भने उनले एक मिनेट पनि प्रधानन्यायाधिशको कुर्सीमा बस्न नहुने बताए ।”
“प्रधानन्याधिश मात्रै होइन भाग दिन तयार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यो कुरा साँचो भएमा तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने माग भण्डारीले गरेका छन् । अझ विषय असार २८को परमादेशवाला फैसला सँग पनि जोडिएको हो भने अरु ५ जना न्यायाधिशहरु माथी पनि प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।”
“ओटीभी नेपाल डट कम सँगैको कुराकानीमा डा भण्डारीले यो विषयमा सत्यतथ्य छानविन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउँन पनि माग गरेका छन् । नागरिकले पत्याउको स्वतन्त्र व्यक्तीहरु राखेर उच्च स्तरीय छानविन आयोग बनाउँनु पर्नेमा उनको जोड छ ।”
“एउटा विज्ञप्ती जारी गरेर खण्डन गरेका भरमा यो विषय सेलाउँन नसक्ने भन्दै भण्डारीले छानविन आयोगको माग गरेका हुन् । कि त मिडियाले गलत लेखेको हुनु पर्यो यति गम्भिर विषयमा यति हलुवा तरिकाले मिडियाले प्रचार गरेका हुन् भने मिडिया माथी पनि कारबाही हुन पर्यो होइन भने राणा र देउवा माथी कारबाही हुनु पर्यो उनले भनेका छन् ।”
“छानविन आयोग नबनाउँने हो भने देउवा र राणा माथी झन शंका बढ्ने उनले बताए । हावा नलागी त पात हल्लिएन होला भन्दै डा भण्डारीले एउटा या दुइटा मिडिया मात्रै आएको भए पनि मिडियाले गल्ती गरेको हो की भन्ने हुन्थ्यो यहाँ त सबै मिडियामा आएको छ के सबै मिडियामा एकै पटक झुट प्रकाशन हुन सक्छ ? उनले भनेका छन् ।”
“नेपालका लागी नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी सँग ओटीभी नेपाल डट कमले गरेको भिडियो कुराकानी हेर्नुहोस्”